मधेस प्रदेश नामाकरण भएपछि एमाले नेताले भने– नामको पछाडिको उद्देश्य के छ ? | Ratopati
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले यसबेला राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान मुख्य कुरा भएको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को नाम मधेश नामकरण भएलगत्तै नेता गैरेले प्रदेशको नाम के पास भयो त्यो ठूलो नभई उक्त नामको पछाडिको उद्देश्य के छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
नेता गैरेले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ः ‘प्रदेशको नाम के पास भयो ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा नामका पछाडिको निहित उद्देश्य के छ भन्ने हो ? राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक, अखण्डता र स्वाभिमान मुख्य हुनेछ ।’
प्रदेश २ को नाम र राजधानी सोमबार टुङ्गो लागेको छ । प्रदेशसभामा भएको मतदान प्रक्रियाबाट यसको टुङ्गो लागेको हो । प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम तय भएको छ भने प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राखिएको छ